Ulwandle, ivilla enedama lokuqubha eluxolweni
Indlu yosapho, kwindawo yokuhlala apho ubomi bumnandi kwi-500m yolwandle (uluhlu). Amashishini akufuphi. Indlu yabucala enedama lokuqubha elivulekileyo ekuqaleni kukaMeyi ekupheleni kukaSeptemba. Ithafa elinomthunzi eliyamene nedama lokuqubha elixhotyiswe ngokupheleleyo ngokupheka ehlotyeni(ikhitshi) (ibhabhi, isinki yasekhitshini, ifriji, iplancha, isolarium, iterrace ekumgangatho wokuqala. Siyakuvuyela ukunamkela apho! Kakuhle kakhulu nakwindawo izigaba umcimbi(ushishino)
I-Villa enendawo yokupaka yabucala evaliweyo. Kwi-rez yokubeka, hlala kwigumbi lokutyela elinetafile enkulu ukuya kuthi ga kwi-12 yabantu. Umabonwakude wesathelayithi, umdlali weDVD. Ikhitshi elahlukileyo lixhotyiswe ngokupheleleyo (i-oven yesiko, i-microphone wave, stick vitroceramics, hlamba izitya, ifriji, umatshini wokuhlamba, iketile, umgcini webhari). Izindlu zangasese kunye neshawari (ziqhelanise nokubuyela elwandle). Phezulu, amagumbi ama-3 ayene-air-conditioning, igumbi IiRoll zegolide ezine-terrace (ibhedi eyi-140 kunye nebhedi eyi-140 kunye nebhedi eyi-90, iikhabhathi), igumbi iBarry Island (iibhedi ezi-3 kuma-90 apho enye iphezulu, iikhabhathi), igumbi iRomilly park (ibhedi 140, isifuba sedrowa). Igumbi lokuhlambela lesitayela saseTaliyane kunye ne-TOILETS zahluliwe.
UKWANDISA OKUSEKO: ukuqhubeka komzali Sanary (ibhedi eyi-160, isifuba sedrowa, ikhabhathi, umabonakude) igumbi leshawari elinabantu abakhubazekileyo abangenamntu (ishawa, IITOILETS, isitya sokuhlambela). I-Barcelo Chamber (i-sofa ifunda i-140, ithelevishini)
Isithili sithe cwaka kwaye sihlala. Zonke izinto eziluncedo zikufutshane. Indawo yokudlala encinci kunye nenkulu (iqonga lesixeko, izilayidi ....), indawo yokudlala i-boules kwi-100m. Ulwandle kunye namashishini kwi-500m. - iindlela ezininzi zebhayisekile ezikufutshane
Ukungahlali endaweni, andizukuba nalo ithuba lokukwamkela. Kodwa uya kuba nomntu ozakukwamkela ukuze ufumane izitshixo kwaye akuncede ukuba kuyimfuneko
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R17928
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Agde